I-Seborrheic alopecia: iimpawu, iimpawu kunye nonyango | Amadoda aQinisekileyo
Baninzi abantu abaphethwe zizifo alopecia seborrheic. Kukulahleka kweenwele kwangoko okunokuchaphazela naluphi na uhlobo lwendoda phakathi kweminyaka engama-20 ukuya kwengama-30 kwaye ihlala ibonakala kwingingqi engaphambili kunye nevertex. Unobangela we-seborrheic alopecia unxulumene nemveliso egqithisileyo ye-sebum ebangela kwaye ikhawulezise ukulahleka kweenwele. Kufuneka sazi ukuba le mveliso ngale ndlela iya kuba sesinye isifo esaziwa ngokuba yi-seborrheic dermatitis.
Kweli nqaku siza kukuxelela yonke into ekufuneka uyazi malunga ne-seborrheic alopecia kunye nendlela yokuyinyanga.
1 I-Seborrheic alopecia kunye nedermatitis
3 Kutheni i-seborrheic alopecia isenzeka
4 Unyango olunokwenzeka
I-Seborrheic alopecia kunye nedermatitis
Into yokuqala ekufuneka igcinwe engqondweni kukuba i-seborrheic alopecia yenzeka njengesifo seborrheic dermatitis. Ayisiyo ukuba ukulahleka kweenwele sisifo ngokwaso. Sisiphumo sokugula kwangaphambili. I-seborrheic dermatitis Sisifo esibangela ukudumba entlonzeni nakwezinye iindawo zomzimba. Ezi ndawo zichaphazelekayo zibangela ukurhawuzelela okuqinileyo. Rhoqo kwezinye iimpawu ezifanayo nesifo esaziwa ngokuba yi-rosacea kwaye kunokuba nzima ngakumbi ukusixilonga. Ezinye zezi zifo zimbini sizikhankanyileyo zinokwenzeka ngaxeshanye kwaye zisenze nzima isifo.
Sisifo esinganyangekiyo nesiphindaphindayo ukuba, ukuba sinyangwe kakuhle, sinokunciphisa iimpawu kwaye sithintele ukwanda. Nangona kunjalo, kunzima kakhulu ukunyanga ngokupheleleyo kuba kukho ezinye izifo eziba mandundu ebusika ngelixa ezinye zincipha ehlotyeni. Kule meko, I-seborrheic dermatitis inokwenzeka ngakumbi nangakumbi kwiinyanga zobusika. Ke ngoko, kufanelekile ukuba abantu abanesi sifo seborrheic babe nolwazi olunzulu malunga neempawu zesifo ukuze baphile naso kwaye balwe neempawu zaso kangangoko.
Phakathi kweempawu ze-seborrheic dermatitis sinezinto ezilandelayo:
I-Dandruff inokuvela kwizinwele, iinwele zeendevu, kunye namashiya.
Ulusu luye lube ne-oyile ngakumbi kwaye lube bomvu kwiindawo ezahlukeneyo zomzimba.
Kuvela ukhakhayi entlonzeni.
Ulusu lweenkophe lunokutsha kwaye oku kwaziwa njenge-seborrheic blepharitis.
Ukuba iyenzeka kwiintsana, uya kubona iifom zobisi kwi-scalp.
Olunye lweempawu eziphambili bubomvu, ukudumba okanye ukubonakala kwezikali ezincinci kwiindawo ezinjengempumlo, izidlele, iindlebe, amakhwapha, umqala okanye igxalaba. Ngokwesiqhelo, uninzi lwabantu abane-seborrheic dermatitis banayo esidleleni. Bahlala benobubomvu ngokubanzi obunika imvakalelo yokutshiswa elunxwemeni.
Kutheni i-seborrheic alopecia isenzeka
Siyazi ukuba i-seborrheic alopecia kukulahleka kweenwele kwangoko oko ihlala ichaphazela abafana abaphakathi kweminyaka engama-20 ukuya kwengama-30. Le mveliso igqithileyo kwi-sebum ibangela kwaye ikhawulezise ukulahleka kweenwele. Ezinye zeempawu ezihamba nale alopecia ye-seborrheic sisiselo esinxilisayo, iintlungu entlonzeni kunye ne-dandruff enamafutha.
Isizathu se-seborrheic alopecia sivela kwimisebenzi egqithileyo yamadlala asabisayo. Ezi ndlala zonyusa umsebenzi wazo ngokubola kwehomoni okanye ngomsebenzi we-enzyme eyaziwa ngokuba yi-5alpha-reductase. Le enzyme yiyo eguqula i-testosterone ibe yi-dihydrotestosterone. Inani lee-enzymes ezinoxanduva lokuguqula enye ibe yenye kunye nenani lezamkeli zokubamba ii-androgens ezikhoyo kwi-scalp ziyahluka. Olu tshintsho lwehomoni lubonakaliswa kwisixa se-sebum esivelisayo. Ubungqongqo obubonakaliswa yi-seborrheic alopecia buxhomekeke kwindlela i-enzymes kunye ne-receptors ezisasazwa ngayo entlonzeni.
Kwenzeka ukuba amanqanaba ale enzyme aphakamileyo kwiifollic zomhlaba, umphambili kunye nendawo yevertex. Oku kwenzeka kumadoda, kwabasetyhini. Nangona kunjalo, kwindawo yeeparietali kunye ne-occipital bancinci. Umahluko okhoyo koku kukuba inani lezamkeli ezikhoyo kwifollic liphezulu kakhulu kubafazi kunamadoda. Ke, Abasetyhini abaphantsi kwe-seborrhea kunye neenwele ezinamafutha. Esi siphene sihlala senzeka kwabasetyhini abaneengxaki zehomoni kunye nezinye iingxaki zokwetyisa. Ngesi sizathu, ukuba sibona ukulahleka kweenwele okuhamba kunye ne-sebum egqithileyo, asinako ukunciphisa le nkcazo yokuba i-dihydrotestosterone inokubangela ezi zinto zinjani.
Into iba mbi ngakumbi xa i-seborrheic alopecia inesakhono sokwakha iifollic, etshintsha ukubuyiswa kweenwele. Ukuba iinwele zisetiwe, kodwa zinokuphinda zifumaneke kwakhona, ingxaki ayinzima kangako. Ukugqithisa konke oku kwenzeka ngokusebenzayo sinokubona ukuba kukho i-quadrant androgenetic alopecia edibana kwaye ihlala kunye ne-seborrheic alopecia. Ngokwesiqhelo izinto ze-sebum zii-cholesterol, i-triglycerides, ii-acid ezinemida, iskwerene kunye ne-sphingosine. Onke la macandelo anoxanduva lokuvelisa ukunciphisa i-pH kwaye, ke ngoko, avelisa utshintsho kwimetabolism yeeseli zolusu entlonzeni.
Esinye isizathu esinokuvelisa esi sifo sihambelana nefungi yeklasi yeMalassezia. Ezi fungi zifunyenwe ngobuninzi kwaye zinokuchaphazela indawo ezinesebum eninzi. Ngaphandle koku, izazinzulu azikadibanisi ngokuthe ngqo nale fungus kwimbonakalo yesikhumba.
Unyango olunokubakho kwesi sifo luyi-trichological. Kuthetha ukuba kungcono ukuba neepropathi ezicocekileyo zempilo ofuna ukuba nazo ngaphambili ukuze kupheliswe i-sebum egqithisileyo eyenza isiseko sokulahleka kweenwele. Kukho indawo eqhelekileyo yokunyanga isitulo sokucoca kunye neempawu zokulwa neentsholongwane. Oku kuluncedo ekuvuseleleni ukhakhayi kunye nokugcina umsebenzi we-metabolic wee-follicles zeenwele kunye nee-bulbs.
Ndiyathemba ukuba olu lwazi ungafunda ngakumbi malunga ne-seborrheic alopecia kunye neziphumo zayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ialopecia yeSeborrheic